Abenzi base China abavelisi kunye nabathengisi | Xuanyi
Ukusebenzisa i-porosity of sintered body, ingafakwa nge-10% ~ 40% (iqhezu levolumu) yeoyile yokuthambisa, enokusetyenziswa phantsi kwemeko yokuhanjiswa kweoyile. Ukuthwala ishishini, ngakumbi nangakumbi amashishini kunye namashishini asebenzise ukuthwala ioyile, kwaye inani elikhulu lamashishini liye lazimanya nomzi mveliso weoyile.
Inempawu zexabiso eliphantsi, ukungcangcazela kokungcangcazela, ingxolo ephantsi, kwaye akukho mfuneko yokongeza ioyile yokuthambisa kwiiyure ezinde zokusebenza. Ifanelekile ngakumbi indawo yokusebenza ekungekho lula ukuyithambisa okanye ukungavunyelwa ukuba imdaka ngeoyile.Ukulinda yiparameter ebalulekileyo yokuthwala ioyile. Ukuthwala ioyile ukusebenza ngesantya esisezantsi kwaye phantsi komthwalo omkhulu kufuna amandla aphezulu kunye ne-porosity ephantsi.Lolu hlobo lokuthwala lwasungulwa kwinkulungwane yama-20. Ngenxa yexabiso layo eliphantsi lokuvelisa kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo, kuye kwasetyenziswa ngokubanzi. Liye laba yinxalenye ebalulekileyo ekuphuhlisweni kweemveliso ezahlukeneyo ezifana neemoto, izixhobo zasekhaya, izixhobo zomsindo, izixhobo zeofisi, oomatshini bezolimo kunye nokuchaneka komatshini.Ukuthwala ioyile kuhlulwe kubhedu, isinyithi, isiseko sobhedu, njl.
Sebenzisa iimpawu zokungena kwemathiriyeli okanye ukuhambelana kweoyile yokuthambisa, ngaphambi kokufakwa kunye nokusetyenziswa kwetyholo elithweleyo, ioyile yokuthambisa inokufakwa ngaphakathi kwento etyholwayo, kwaye ukuthwala kunokwenziwa ngaphandle okanye ngaphandle kweoyile yokuthambisa. ixesha elide ngexesha lokusebenza. Olu hlobo lokuthwala lubizwa ngokuba kukuthwala ioyile. Xa i-shaft iyeka ukujikeleza, amahlathi apholileyo apholile, ii-pores ziyabuyiselwa, kwaye ioyile yokuthambisa iyabuyiselwa kwi-pores.
Nangona kunokwenzeka ukuba ukuthwala ioyile kwenziwe ifilimu epheleleyo yeoyile, kumaxesha amaninzi, olu hlobo lokuthwala lukwimeko exubeneyo yomlo wefilimu yeoyile engaphelelanga. ukwenza ioyile yokuthambisa igcwele i-pores zezi: iinkuni, ukukhula kwesinyithi, ukuphosa ingxubevange yobhedu kunye nomgubo wokunyibilikisa isinyithi; Ubumbano phakathi kwezinto kunye neoyile yokuthambisa inokusetyenziselwa ukwenza ioyile yokuthambisa isasazeke ngokulinganayo kuloo nto. Uninzi lwezinto ezithwala ioyile zizipolymers, ezinje nge-oyile ethwala i-phenolic resin. Umgaqo osebenzayo wenkqubo yokuthwala ioyile.
Egqithileyo Umthubi otyholwayo
Okulandelayo: Izixhobo Isixhobo samandla